नेकपा नेता/कार्यकर्तालाई प्रश्न– ‘७५ प्रतिशत विदेशी पढाउँछु’ भन्ने मेडिकल कलेजलाई तपाईंको समर्थन किन?
असार ३०, २०७५ शनिवार १९:२३:४५
सरकारको बचाउ गर्ने नाममा डा गोविन्द केसीमाथि एउटा आरोप लगाइने गरेको छ– नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य बनाउँदैछन्, डा केसी। त्यसभन्दा पनि अघि सरेर अर्कोथरीले आरोप लगाइरहेको छ– डा केसी विदे...
चिकित्सा प्रतिवेदन लागू नगर्ने कुरा मधुमेहका बिरामीले रसबरी खाने जिद्दी जस्तै [भिडियो]
असार ३०, २०७५ शनिवार १८:३५:४९
यसरी प्रदर्शनमा आउनु बाध्यता भयो। हामी पञ्चायतकालमा पनि यसरी हिँडिरहन्थ्यौं। प्रजातन्त्र आयो, हामी यसरी हिँडिरह्यौं। अहिले गणतन्त्र आयो। तर, उस्तै छ। यो के भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार आएको छ। स्थायित्व पनि आएकाले यो सरकारले केही गर्ला कि भन्...
दुर्गममा मेडिकल कलेज चाहिएको हो कि सुविधा सम्पन्न अस्पताल ?
असार ३०, २०७५ शनिवार १०:४२:२५
चिकित्सा शिक्षाका विषयमा बादविवाद भइरहेको छ । द्वन्द्व चलिरहको छ। दुर्इतिर ध्रुवीकरण भइरहेको छ। ध्रुवीकरणबाट स्थायी समाधान होइन, तर्क निस्कन्छन्। तर्क दुबै ध्रुवबाट निस्कन्छन्। आफ्नो ध्रुव बलियो बनाउन `गलत´ भावना निस्किन्छन्। जसरी दुर्इ ध्रुवतिर विभाजित...
सुत्केरी महिला कर्मचारीप्रति स्थानीय सरकार किन असंवेदनशील?
असार ३०, २०७५ शनिवार ०७:००:००
म स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेको झन्डै तीनवर्ष पुग्न लाग्यो । तर, आज पनि सुरुवातका दिनजस्तै नयाँ जस्तो लाग्छ र काम गर्ने जाँगर चल्छ । निकै रहरले पढेकाले पनि होला, मलाई भर्खर मात्रै अनमी भएर काम थालेको जस्तो लाग्छ। सुषमा कोइराला मेमोरियल क्याम्पस, नेपालगञ्जबाट ०७२ सालमा ...
एमबिबिएस विद्यार्थीको प्रश्नः बिरामी हेर्नै नपाई डाक्टर बने के हुन्छ ?
असार २८, २०७५ बिहिवार ११:३२:३७
डा गोविन्द केसी १५ औँ पटकको अनसनका लागि कर्णाली अञ्चलको जुम्ला पुगे । उनी जुम्ला पुग्नसँग् उनको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छैन । वर्षौंदेखि सिटामोलका लागि छट्पटाइरहको कर्णाली अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै केही जुर्मुराउन खोज्दै छ। हिजो सामान्य बिरामी...
जनसंख्या नियन्त्रणको सर्वोत्तम उपाय: परिवार नियोजन
असार २७, २०७५ बुधवार १३:१४:४७
हरेक वर्ष जस्तै यसवर्ष ‘परिवार नियोजन मानव अधिकार’ भन्ने नाराकासाथ आज ११ जुलाई, सन् २०१८का दिन विश्वभरीका मुलुककासाथै नेपालमा पनि विश्व जनसंख्या दिवस मनाइँंदैछ । जनसंख्या दिवसको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले जनसंख्या र जनसंख्या बृद्धिका वारेमा केही लेख्न सान्दर्भिक...
सरकार, डा केसीलार्इ शूलीमा चढाऊ !
असार २७, २०७५ बुधवार ०८:१०:००
जसलाई न परिवारमोह छ, न त भयो सन्तानमोह। छ त केवल देश र जनतामोह। हो, डा गोविन्द केसी त्यस्ता महापुरुष हुन् जो देश र जनताका भलाइका निम्ति आफ्नो जीवन सुम्पिन तयार छन्। १५ पटकसम्म राष्ट्रका निम्ति जीवनदान गर्न तत्पर यी महापुरुषलाई किन बारम्बार...
असार २४, २०७५ आइतवार १७:५९:१३
संजीवनी हस्पिटल एन्ड आइभीएफ सेन्टर विराटनगरमा गम्भीर अवस्थामा ल्याइएकी बिरामी ज्यान जोगाउन डा आलोक रायले तुरुन्तै उपचार हुन सक्ने अस्पतालमा रिफर गरे। विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनले रिफर गरेका थिए । जुन सरकारी मात्रै नभएर नेपालको पूर्वी भेगकै सुविधा सम्प...
डा केसीको अनसन : लाज लागोस् सरकारलाई
असार २४, २०७५ आइतवार १२:४२:१७
शुक्रबार जुम्लाका विभिन्न भेगबाट द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरुले र्यााली निकाले। उनीहरुले डा गोविन्द केसीको समर्थन मात्रै गरेनन्, उनीप्रति निकै आभार व्यक्त गरे। त्यो आभारभावमा दूरगाउँको गरिबका पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको विश्वास जोडिएको छ। र, डा केसीको आन्द...
चिकित्सा विज्ञानमा जरुरी छ ज्ञानको संयोजन
असार २३, २०७५ शनिवार ०६:००:००
ज्ञान र विज्ञानको संयुक्त प्रयासबाट विचारको सवलीकरण भई प्रविधी उच्चकोटीको हुनजान्छ र त्यसले दिने प्रतिफल सकरात्मक, गुणस्तरिय र प्रभावकारी हुन्छ। ज्ञानको संसार वृहत रहेको छ र यो सीमाहीन छ। अझ भनौं यो अनन्त छ। प्रकृतिका नियमहरु र प्रकृतिका अंशहरुबीच हुने अन्तरक्रि...
असार १९, २०७५ मगलवार १३:१९:३२
उपचारको अभावमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने लोककल्याणकारी चाहना बोकेर जुम्ला पुगेका छन् डा गोविन्द केसी। तर, दुर्भाग्य उनी आफैंले उपचार अभाव झेल्नुपरेको छ। घर्किंदो उमेर, प्रतिकूल मौसम र पटक–पटकको अनसनले जीर्ण ज्यान यसपल्ट चाँडै थलिएको छ। फोहर र चिसो...
असार १९, २०७५ मगलवार ०९:४८:४२
स्वास्थ्य तथ्याङ्क गुणस्तरीय बनाउनका लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकडिङ जरुरी हुन्छ । यो स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी प्रवेश गरेदेखि उपचार हुँदा र बाहिरिँदासम्मको अवस्थालार्इ सफ्टवेयरको सहयोगमा सुरक्षित राख्ने प्रणाली हो । बिरामीको सुरुवाती अवस्थादेखि उपचारसम्मको प्रक्रियालार्इ जस्ताक...
डा केसीको सत्याग्रहमा दुई तिहाइको बल नदेखाऊ!
असार १६, २०७५ शनिवार १७:४४:४६
स्वास्थ्य सेवा सुधारको उही मान्यता र मागमा रहेर पन्धौं पटकसम्म अनसन बसेका डा गोविन्द केसीले मुख्य सबै दलले नेतृत्व गरेको सरकार भोगिसकेका छन्। सम्भवतः सबै मुख्य नेताहरुबाट माग पूरा हुने आश्वासन पनि पाएका छन्। तर उनीमाथि धोका भइरहेको छ। यही धोका महसुस गरी डा केसी पन्ध्र...
असार १५, २०७५ शुक्रवार ११:५९:४४
अस्पतालको बैठक चलिरहेको थियो । यही क्रममा एकजना डाक्टर साहेबले मननीय कुरा उठाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपालीहरु अचम्मको व्यवहार विकास भइरहेको छ । हामी हतारको जिन्दगी जिइरहेका छौं।हामी अस्पतालमा जचाउँन आउँछौं । समस्या जटिल हुँदा भर्...
असार १३, २०७५ बुधवार ०७:००:००
हामी अघिल्लो वर्ष मलेसियामा नेपालीहरुको ‘सडेन डेथ’ हुने विषयमा अध्ययन गर्न गएका थियौं। जुन व्यक्तिको ‘सडेन डेथ’ भनिएको थियो, उनी त पहिल्यैदेखि बिरामी रहेछन्। अरुको नजरमा उनको मृत्यु एक्कासी भएको देखिए पनि उनी आफैंलाई बिरामी रहेको था...
कविता : दुई भिन्न संसार
असार ९, २०७५ शनिवार १४:०३:१५
त्यो संसारमा के भइरहेछ म यो संसारको एउटा कुनामा बसेर सब थाहा पाइरहेछु। त्यहाँका हाँसो/रोदन सब मेरा कानमा गुन्जन्छन्। त्यहाँका खुसी/पीडा सब मेरा आँखैअगाडि नाच्छन्। अनि त्यो संसारको अवस्थाले यो संसारको व्यस्तता निर्धारण गर्छ। जब खुसीले...
असार ७, २०७५ बिहिवार ०६:३४:००
हरेक उमेरसमूहका लागि योग आवश्यक हुन्छ। आजको भागदौडको जीवनमा त शारीरिक तन्दुरुस्तीको सहज उपाय योग नै हो। योगीहरुका अनुसार, योगबाट मानसिक रोगदेखि दीर्घ रोगसम्म निको हुन सक्छ। योगको महत्व र योग कसले गर्ने, कुन–कुन रोगीले गर्न हुने र कुन समयमा गर्ने आद...
शोकमग्न गुरुआमा मधु दीक्षित देवकोटालाई एक शिष्यको पत्र
असार ६, २०७५ बुधवार १२:४६:४२
छेउको भित्तामा सुमधुर मुस्कानसहित प्रख्यात डाक्टर साबको त्यो फोटो अनि त्यसको छेउमा उहाँको पार्थिव शरीर । कल्पना नै गर्न कठिन, तर के गर्ने मृत्यु एक अटल सत्य, जसलाई कसैले रोक्न सक्दो रहनेछ । आदरणीय गुरुआमा, म तपाईको पीडा जस्ताको त्यस्तै त महसुस त गर्न सक्...
क्यान्सरसँग हारेका डा.देवकोटा
असार ५, २०७५ मगलवार १२:५६:१४
अर्घाखाँचीको ग्रामीण भेगमा लामो समय चिकित्सा सेवा गरेका डा चित्रप्रसाद वाग्लेले केही वर्षअघि धर्ती छाडे । एपेन्डिक्सको क्यान्सरबाट थलिएका उनले धेरैको जीवन लम्बाए पनि आफ्नै सकेनन् । अन्ततः चिर निद्रामा लीन भए । उनको निधनमा धेरै रोए । समय फेरियो । नियती फेरिएन । फेरि ...
डा उपेन्द्र देवकोटाको अभाव खड्किरहनेछ : गौरीबहादुर कार्की
असार ५, २०७५ मगलवार १०:३५:२०
प्रा डा उपेन्द्र देवकोटा, प्राध्यापक र डाक्टर चिकित्सक दुवै हुन्। नामधारी प्राध्यापक होइनन्। कतिपय हाम्रा प्राध्यापक नामधारीहरु प्राध्यापन नगरीकन नै प्राध्यापक लेख्छन्। शिक्षण तथा चिकित्सकीय दुवै पेशामा। नेपालमा वीर अस्पतालमा त्यतिबेलाका सुविख्यात सर्जन डा. दिनेशनाथ गङ्गोलको ...